Izithuba ezifakiwe: Ostreliya
0 Professional England Khangela Off Tigerish Bangladesh
ipapashwe 12th EyeDwarha 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Bhangladeshi, eNgilani. uvuselelwe 13 EyeDwarha, 2016 .
Ngxatsho eNgilani kwi uloyiso yobungcali ODI series nxamnye Bangladesh. The Tigers ukuze ibonwe ngumntu wonke njengoko iqela enzima kunye neendwendwe ngokuqinisekileyo uya kujongana iimvavanyo sterner - kodwa nayiphi na inkcaso Asia kumhlaba ikhaya uyiyo nantoni na kodwa Itrayi .... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: adil Rashid, alex Hales, Ostreliya, Ben Duckett, Ben Stokes, Eoin Morgan, ukuba Buttler, Mzantsi Afrika
0Australia Jika uloyiso yabo kulula Umlotha
ithunyelwe 17th EtiMnga 2013 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi uthuthu.
Ngokuzimisela okukhohlakeleyo kunye nokubulala ngokwemvelo okufanelwe yingcuka ekugxotha inyamakazi eyenzakeleyo, Aus­tralia duly com­pleted the rout of a demor­al­ised Eng­land this morning.
I-England ayilulandelanga olu ngcelele kwaye i-Australia eyakhiwe ngokutsha iye yaxhobisela kubuthathaka bonke nokusilela ukuthoba ihlazo.
Ukuphumelela uchungechunge lwe-Ashes elandelelanayo ngokulandelelana yayiyinto entle kakhulu kwaye yayiyenye engaphaya kweNgilani. I-urn ngoku ibuyela e-Australia (ngokufuziselayo, kunjalo!) and we no doubt won’t hear the end of it from our cous­ins on the oth­er side of the planet.
Njengoko uCook wavuma kwinkomfa yakhe yemidlalo yeqonga, I-England ibonakalisiwe kuzo zonke iindawo kunye nentando, Ndiyakrokrela, funa uloyiso olu-5-0. Yinto nje uhlobo babo ukuba bathathe konyawo lwabo cima irhasi. Ingcuka akayifukulanga okuqwengiweyo, ngoku ufuna ukugqiba yonke imo yokugqibela emnandi.… Funda Inqaku Pheleleyo
tags: Alastair Cook, Andrew Flintoff, Ostreliya, Ben Stokes, Brad Haddin, Durham, eNgilani, Jonathan Trott, kevin Pieterson, Michael Carberry, Mitchell Johnson, nathan Lyon, Nick Compton, Steven Smith, uthuthu
0 lokuqalisa eNgilani 11 Ndathatha yi Michael Clarke
ithunyelwe 17th EyeNkanga 2013 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi uthuthu.
Kudliwanondlebe oluhlaziyayo ukaputeni wase-Australia uMichael Clarke uye isaziso i-England iqala 11 kuvavanyo lokuqala lweThuthu. Asiqinisekanga ukuba yinto entle ebonakala ngathi uyalazi iqela, kodwa iqela alidwelileyo liqela esasiya kuba silichongile, so it could be just intel­li­gent guesswork.
tags: Ostreliya, eNgilani, uthuthu, The Gabba